Ukubamba kwirebe bekude kuphikisana kwihlabathi lezemfundo, njengokuba amanqaku amanqanaba ayenayo , nawo. Abanye ootitshala basebenzisa ii-curves kwiimviwo zebakala, kanti abanye ootitshala bathanda ukunika amabakala ngeepesenti njengoko kunjalo. Ngoko, kuthetha ukuthini xa utitshala wakho ekutshela ukuba uza "kubamba ijika"? Masifunde!
Ngokubanzi, "ukukhangela kwikota" ligama elisetyenziselwa iindlela ezahlukeneyo zokulungiswa kwebanga lokuhlola ngandlela-thile.
Uninzi lwexesha, olu hlobo lokubamba lukhuthaza abafundi bebakala ngokuhambisa ipesenti yakhe yangempela uphakamise amanani angaphantsi okanye ukhulise ibakala lokubhala. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, le ndlela yokubamba ingabacaphukisa abafundi kuba amanye amabakala asebantwana angatshintshwa kwipesenti ephezulu kunezinye kuxhomekeke kwindlela esetyenziselwa ukujika.
"I-curve" ekubhekiswe kuyo kwikota "yi- curve yentsimbi ," esetyenziswe kwiinkalo zokubonisa ukusabalala kwanoma yiphi isethi yedatha. Kubizwa ngokuba yi-curve yebell , kuba kanye xa idatha ifakwe kwisigrafu, umgca odalwe ngokuqhelekileyo udala umlo weentsimbi okanye intaba. Xa kusasazwa ngokuqhelekileyo , ininzi yedata iya kufutshane nendawo okanye intetho, kunye namanani ambalwa kakhulu ngaphandle kweentsimbi - ezigqithisileyo.
Kutheni Kuthiwa Ootitshala Basebenzisa I-Curve?
Iikrityi zixhobo eziwusizo kakhulu! Banokukunceda utitshala ahlaziye aze alungele amanqaku xa kuyimfuneko. Ukuba, umzekelo, utitshala ubheka amanqaku eklasi lakhe kwaye ubona ukuba inqanaba (eliqhelekileyo) ibanga lasemkhatsini walo lilinganiselwa kwi-C, kwaye abafundi abancinci bafumana ama-B kunye neeDs kunye nabafundi abambalwa abafumana i-As kunye ne-Fs, ngoko unokugqiba ukuba uvavanyo lwaluyilo oluhle ukuba usebenzisa i-C (70%) njengebanga eliphakathi.
Ukuba, ngakolunye uhlangothi, uhlalutya ibakala lokuvavanya kwaye ubona ukuba ibanga eliphakathi lilingama-60%, kungekho mabakala ngaphezulu kwama-80% kwaye unokugqiba ukuba uvavanyo lube lunzima kakhulu.
Ngaba ootitshala beBanga kwiKharve?
Kukho iindlela ezininzi zokubakala kwikota, ezininzi zazo ziyinkimbinkimbi zeemathematika (njengokuba, ngaphaya kwesakhono seMAT efunekayo).
Nangona kunjalo, apha zimbalwa iindlela ezithandwa kakhulu ootitshala abaphengulula amabakala kunye neendlela ezininzi ezicacileyo:
Yongeza Iingongoma: Utitshala uthatha isigaba somfundi ngamnye ebangeni elilinganayo nenqaku elifanayo.
Xa Ingasetyenziselwa: Emva kokuvavanywa, utitshala unquma ukuba ininzi yabantwana inemibuzo emi-5 neye-9 engafanelekanga. Unako ukugqiba isigqibo sokuba wongeze umbuzo ukuba umbuzo ngamnye ufanelekile kumanqaku abo bonke abantu.
Izinzuzo: Wonke umntu ufumana ibakala elingcono.
Iingxaki: Izingane azifundanga kumbuzo ngaphandle kokuba utitshala unikezela ukuhlaziya.
Bump kwiBakala ukuya kwi-100%: Utitshala uhambisa amanqaku omntwana omnye kwi-100% kwaye uneza inani elifanayo lamaphupha asetyenziselwa ukufumana le nkunzi ukuya kuma-100 kumanqaku onke.
Xa Ingasetyenziselwa: Ukuba akukho namnye eklasini athola i-100%, kwaye amanqaku afutshane anama-88%, umzekelo, utitshala unokufumanisa ukuba uvavanyo lukhuni kakhulu. Ukuba kunjalo, unokongeza iingongoma ezili-12 kumanqaku enyana ukuba enze i-100% kwaye afake amaphuzu angama-12 kwinqanaba lomntu wonke, naye.
Izinzuzo: Wonke umntu ufumana amanqaku angcono.
Iimpawu ezingabonakaliyo: Abantwana abanamabanga aphantsi kakhulu bancedisa ubuncinane (i-22% kunye neengongoma ezili-12 kusekho ibakala elingaphumeleli).
Sebenzisa umsila we square: Utitshala uthatha ingcambu yesigcawu sepesenti yokuvavanya kwaye wenza ukuba ibanga elitsha.
Xa Ingasetyenziselwa: Utitshala ukholelwa ukuba wonke umntu udinga ukuxhaswa, kodwa unokwabiwa ngokubanzi kwamabakala (abantwana abambalwa abane-A, njl.) Ngoko ke, uthatha ingcambu yesikwere sebakala ngalinye lomntu kwaye uyisebenzisa kwibakala elitsha: √x = ibakala elungisiweyo. Ibakala langempela = .90 (90%) Ibakala elilungisiweyo = √.90 = .95 (95%).
Iimpawu zokungabikho: Akukho bakala ngalinye lilungiswa ngokulinganayo. Omnye ofumana i-60% uza kufumana ibakala elitsha lama-77%, eliyi-17 point point. Ingane ibhala ukuba i-90% ifumana u-5-point point.
Ngubani okhupha iCirve?
Abantwana eklasini bahlala becasulwa ngumfundi omnye oye waphazamisa intambo. Ngoko, oko kuthetha ukuthini, kwaye wakwenza njani? Ngasentla, ndathetha, "iindawo eziphambili," ezo zizo zibalo ekupheleni kwebell curve kwigrafu.
Kwiklasini, ezo ziqhamo ezigqithiseleyo zimelela amabakala abafundi kwaye zinoxanduva lokukhupha ikhefu. Ngokomzekelo, ukuba uninzi lwabahloli lufumana i-70% kwaye umfundi omnye kuphela kwiklasi yonke uzuze i-A, i-98%, ngoko xa utitshala ehamba ukulungelelanisa amabakala, loo mpahla ogqithiseleyo angadla amaninzi. Nantsi indlela, usebenzisa iindlela ezintathu zokubamba okuvela ngaphakathi:
Ukuba utitshala ufuna ukufaka iingongoma zemibuzo ephosakeleyo ebangeni ngalinye, kodwa ibakala eliphezulu lingama-98%, ngoko akayi kudibanisa amanqaku angaphezulu kwama-2 kuba iya kunika le nana inombolo engaphezulu kwe-100%. Ngaphandle kokuba utitshala ekulungele ukunika ikhredithi eyongezelelweyo yokuvavanya, ke akayi kulungelelanisa amanqaku akwaneleyo ukuba abale kakhulu. Ngokucacileyo, abantwana abafumana amanqaku angama-67% baya kucaphukisa oku.
Ukuba utitshala ufuna ukulahla ibanga ukuya kuma-100%, wonke umntu uya kuphinda afumane amaphuzu angabini adibeneyo kwibakala lawo, elingenayo ingxuma ebalulekileyo.
Ukuba utitshala ufuna ukusebenzisa i-root root , akunjalo kumfundi nge 98% kuba ibakala liza kuphakama elinye iphuzu, kwaye abazali bomfundi okanye abafundi bangafaka isikhalazo sokuba abantwana abanamaqondo aphantsi banokuphucula ngakumbi.
(Pre) Imbali kaClovis - AmaQela okuHlola aMazwe aseMandulo
Iimfazwe zeNguqulelo yesiFrentshi: iMfazwe yaseValmy
Ukudibanisa noMninimkhulu uZadkiyeli, Ingelosi Yenceba
Indlela yokubetha i-Zone yeeNgcaciso kwiNdlela elula
Thixo bobuhedeni noothixokazi
Indlela i-Blue Color Snow Works
Tzedakah: Ngaphezulu kweCharity
I-Star Star Anatomy 101
I-Oakwood University Admissions
Isibhengezo sobuvila (igrama)